Samsung ကဂီယာ S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: seventh time lucky for Korean firm's smartwatch - သတင်း Rule
Samsung ကဂီယာ S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့စမတ်နာရီများအတွက်ကံကောင်းသတ္တမအချိန်
Samsung ကနောက်ဆုံးကြောင့်အက်ကွဲသိရသည်တစ်ခုမှာသတ္တမကြိုးပမ်းမှု. နှင့်မိုင်အားဖြင့် - အဆိုပါ Gear S2 ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖန်ဆင်းတော်မူပြီကိုအကောင်းဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖွင့်, တစ်စမတ်နာရီနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့၏အမှန်တကယ်ပိုကောင်းနည်းလမ်းများမိတ်ဆက်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ကဂီယာ S2 ပြန်လည်သုံးသပ်: ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့စမတ်နာရီများအတွက်ကံကောင်းသတ္တမအချိန်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 9th နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 11.26 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ကသူ့ရဲ့သတ္တမဒီဇိုင်းကိုအတူစမတ်နာရီနောက်ဆုံးအက်ကွဲခဲ့သည်: အားလုံးနီးပါးက Android စမတ်ဖုန်းများနှင့်ဖွင့်ပြသဘို့မဟုတ်ရဲ့တစ်ဦးအလှည့် bezel နှင့်သဟဇာတတစ်လှည့်လည်စောင့်ကြည့်.
ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်အတှေ့အကွုံအောင်စမတ်နာရီ၏အတော်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်. သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2013, ထိုအခါမူကားကတည်းကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီခြောက်ခုကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှအတော်လေးပိုင်ခွင့်ကတယ်သော်လည်း.
အဆိုပါ Gear S2 က Samsung ရဲ့သတ္တမပါကြောင်းနှင့်ထိုသို့ကြိုးစားရကျိုးနပ်ခဲ့.
က Round နှင့်ဆွဲဆောင်မှု
တက်ကြွစွာအသုံးပြုခံရသောအခါအဆိုပါအမြဲ-အပေါ်မျက်နှာပြင်အနိမ့်ပါဝါ display ကိုကို switch, Google ရဲ့ Android Wear နာရီအသုံးပြုခဲ့သောကြောင့်ဆင်တူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
လူအပေါင်းတို့သည်ယခင် Samsung ကစမတ်နာရီနှင့်မတူဘဲ, ထိုဂီယာ S2 ပါးလွှာသည်, ပတ်ပတ်လည်နဲ့ဆွဲဆောင်မှု. ဒါဟာ "ဂန္ထဝင်" နှင့်စံနှစ်ခုမော်ဒယ်များလာ. ငါစံဂီယာစမျးသပျ 2.
ဒါဟာတစ်ဦးသံမဏိကိုယ်နှင့်ခေတ်သစ်ပတ်ပတ်လည်လက်ပတ်နာရီနှင့်ပုံသွင်းအဖြူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်သိုင်းကြိုးတူ. တစ်ဦးကအလှည့် bezel ကွင်းတစ်ပြတ်သား 1.2in AMOLED screen ကို, အရာမှာပတ်ပတ်လည်စမတ်နာရီများအတွက်သေးအမြင့်ဆုံး Pixel သိပ်သည်းဆရှိပါတယ် 302 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per. ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးပတ်ပတ်လည်ယှဉ်ပြိုင်အသည် 286 ppi Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, Samsung ကအားလုံးဒါပေမယ့်စတုရန်း beats အဓိပ်ပာယျ 42မီလီမီတာ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, အရာလည်းတစ်ဦး 302ppi pixel အရေအတွက်ရှိပါတယ်.
မျက်နှာပြင်မြတ်သောဖြစ်ပါသည်: ပြတ်သား, တကယ်မှောင်မိုက်လူမည်းနှင့်အတူကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း, မှောင်မိုက်လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်အထူးသဖြင့်ကောင်းသောရင်ဆိုင်နေရရာလုပ်. အန်းဒရွိုက်နဲ့ဆင်တူသည့်အခါတက်ကြွမကအခြေခံပညာအဖြူ-on-အနက်ရောင်မျက်နှာမှပြောင်းနိုင်သည် Wear. ဒါဟာအဓိကမျက်နှာကဲ့သို့မြင့် resolution ကိုမဖွင့်, ဒါပေမယ့် Moto အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့်အတော်လေးဤမျှလောက်အရုပ်ဆိုး pixels သညျးမခံပါဘူး 360.
အဆိုပါလက်ပတ်နာရီ 11.4mm အထူ, တစ်ကွေးကိုယ်ခန္ဓာနှင့် tapered ဒီဇိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ဝတ်ဆင်သောအခါပါးလျကြည့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါလက်ပတ်နာရီလက်ကောက်ဝတ်ပေါ်အငြိမ့်ထိုင်. ၎င်း၏ tapered ကိုယ်ခန္ဓာဒီဇိုင်းကိုတု High-end စက်မှုယံကြောင်းနှင့်လက်ပတ်နာရီရဲ့ 11.4mm အထူအချို့ကိုဖုံးကွယ်. ဒါဟာအစ IP68 စံချိန်စံညွှန်းမှရေစိုခံမယ့်, သောပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်ပေါ်နှင့်အတူကြင်နာမှုကိုဆိုလိုသည်.
အဆိုပါရော်ဘာသိုင်းကြိုးအရည်အသွေးမြင့်မားသည်နှင့်အချို့သော Casio အတိတ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ငါ၏လက်ကောက်ဝတ်ချွေးလုပ်ဘူး. ဒါဟာစီးပွားဖြစ်တွန်းအားပေး-button ကိုဗီဒီယိုကလစ်အားဖြင့်အရပျ၌ကငျြးပင်, အရာဖယ်ရှားပစ်ရန်လွယ်ကူစေသည်, သင်မူကား, Samsung ကကကမ်းလှမ်းကြိုးကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်.
နှစ်ယောက် box ထဲမှာရှိပါတယ်, လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်လက်ပတ်နာရီ၏အတိမ်အနက်ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတစ်ကြီးများနှင့်တဦးတည်းသေးငယ်တဲ့သိုင်းကြိုး. အဆိုပါ Gear S2 ဂန္ထဝင်စံကြိုးအတှကျအစဉ်အလာလက်ပတ်နာရီ lugs ရှိပါတယ်.
နာရီ၏နောက်ကျောတစ်နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာရှိပါတယ်, အများဆုံးအခြားစမတ်နာရီများကဲ့သို့, သောကို manually တစ်မိနစ်လျှင်သင့်ရဲ့စည်းချက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အစပျိုးနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်း tracker ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြု. ငါတစ်မိနစ်လျှင်တစ်စည်းချက်ပတ်ပတ်လည်အတွင်းကတိကမြှနျတှေ့ရ.
အဆိုပါကြိုးထွက်လဲလှယ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, သင်မူကား, Samsung မှကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်တစ်ဦးစီးပွားဖြစ်ဗီဒီယိုကလစ်စနစ်ကျေးဇူးတင်စကားရဲ့အဘယျသို့ကန့်သတ်နေ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
processor: Samsung က Exynos 3250
Screen ကို: 1.2sAMOLED အတွက် (302ppi) နီလာ
connectivity ကို: ဘလူးတုသ်, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘာရိုမီတာ, နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ
ဒိုင်မန်းရှင်း: 42.3 x က 49.8 x က 11.4
လိုက်ဖက်တဲ့: Android မှာ
အဆိုပါသေးငယ်တဲ့သံလိုက်အားသွင်းရပ်တည်ချက်ကြိုးမဲ့နာရီပညတ်, အ watchface ပြသသို့မဟုတ်တိုးတက်မှု charging ၏ထို option နှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Gear S2 စစ်ဆင်ရေးအတွက် snappy နှင့်တုံ့ပြန်မှုခံစားရ. ဒါဟာ Bluetooth မှတဆင့်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုကျော်စမတ်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်, ကွန်ယက် configured ခဲ့တခါ. အခြား Samsung က Tizen စမတ်နာရီမတူဘဲ, ထိုဂီယာ S2 ဆိုခေတ်သစ် Android စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, app များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဂီယာ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုအသုံးပြုပြီး.
တစ်ဦးက Samsung Device ကိုလိုအပ်ကြောင်းအနည်းငယ် functions တွေရှိပါတယ်, အမည်ရ Samsung က Pay ကို အသုံးပြုသူများလက်ပတ်နာရီပေါ်မှာကောင်းသောနဲ့ NFC နှင့်အတူန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော. Samsung က Pay ကိုဗြိတိန်တွင်ဖွင့်ဖို့မရှိသေးပါ, ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားအတွက်ရရှိနိုင်.
တစ်ဦးချိတ်ဆက်သည့်အခါဘလူးတုသ် connection ကိုခိုင်ကြီး ကို Nexus 6P, Wi-Fi ကိုအအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် useable T9 စတိုင် On-screen ကိုကီးဘုတ်နှင့်အတူ password ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တည်ထောင်ရန်မလွယ်ကူခဲ့စဉ်. အသိပေးချက်များက Wi-Fi ကိုကျော်ချက်ချင်းကယ်နှုတ်ခဲ့သည်, အမြဲအားလုံးစမတ်နာရီများအတွက်အမှုအရာမဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါ Gear S2 ကြာ 36 မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတာဝန်ခံအပေါ်နာရီအတွင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်. အဆိုပါလက်ပတ်နာရီကိုကြိုးမဲ့အားသွင်း dock နှင့်အတူကြွလာ, သောနှစျနာရီအောက်မှာအတွက်ပညတ်.
Tizen, မ Android Wear
မျက်နှာများ၏ရွေးချယ်ရေးသည်ကောင်း, ဆုံးနဲ့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Gear S2 ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ပြိုင်တည်းသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ဆုံးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်. run ကအခြား Android နာရီမတူဘဲ Google ရဲ့ Android Wear, အ S2 က Samsung ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Tizen operating system ကိုပြေး.
ထုံးစံ software နှင့်လှည့် bezel စမတ်နာရီကိုသုံးမှ S2 အမြန်ဆုံးတယောက်ကိုအလွယ်ကူဆုံး. အသိပေးချက်များအဘို့, လက်ဝဲလှည့်ကွက်, ဂီတထိန်းချုပ်မှုများကဲ့သို့အမှုအရာအဘို့ Widgets တွေအဘို့အညာဘက်, နှလုံးခုန်နှုန်း, ပြက္ခဒိန်, ရာသီဥတုနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးခြေရာခံခြင်း. ထိပ်မှဆင်းပွတ်ဆွဲခြင်းပြန်တစ်ခြေလှမ်းဝင်, ဒါမှမဟုတ်လက်ပတ်နာရီမျက်နှာပေါ်မှာတစ်အမြန် settings ကိုအရိပ်ချခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့.
တစ်နည်းနည်းသုံး-dot menu ကို tab ကိုထပ်မံလုပ်ရပ်ရှိကြောင်းဘာမှမ၏ညာဘက်ပေါ်, ဘက်ခြမ်းမှာသေးငယ်တဲ့ခလုတ်ကို apps များနှင့်လက်ပတ်နာရီမကျြနှာကိုမှပိုကြီး button ကိုရန်သင့်အားကြာမြင့်နေချိန်တွင်. သင်၏လက်ကိုအတူလက်ပတ်နာရီကိုဖုံးအုပ်ထားအိပ်ဖို့ကတတ်၏. ဒါဟာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အလိုလိုအားလုံးအကျင့်ကိုကျင့်.
app ကိုရွေးရန် bezel Turn. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အခြား app များကိုတစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားစာရင်းထဲတွင်ကျင်းပကြသည်, ဒါပေမဲ့ apps များအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်ကြောင်း. သောကြောင့်ထိုအရပ်၌ Tizen operating system ၏အခြေခံအားဖြင့်ထည့်သွင်းသူမြားကိုကျော်လွန်မဆိုမဟုတ်. သငျသညျက CNN ရရှိပါသည်, ဘလွန်းဘာ့ဂ်, ဤတွင်မြေပုံနှင့် Samsung app များ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု, S ကနျြးမာရေးနှငျ့စကားသံကိုအသံဖမ်းအပါအဝင်.
အလုပ်ဒဏ်ငွေပါဝင်သော apps များ, ဒါပေမဲ့ရှေးခယျြမှုမရှိခြင်းမကြာမီ Tizen ရဲ့အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းအဘို့လည်းမရှိအဖြစ် developer များအမှန်တကယ်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်အဘို့အမဲနှိုက်၏အဖြစ်တာမရှိဆိုလိုသည်အဖြစ်မည်သည့်အချိန်ချိန်းခံရဖို့မသွားဖြစ်ပါတယ် Android Wear နှင့် Apple ရဲ့ watchOS.
စနစ်ဖို့ထူးဆန်း quirks ရှိပါတယ်. ဥပမာအားဖြင့်, အချို့သောလက်ပတ်နာရီမျက်နှာများတက်ကြွဖြစ်ကြပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်မှပုတ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးအချိန်မှတ်နာရီကိုချွတ် chronograph မျက်နှာစုံ၏အောက်ဆုံးရဲ့ထိပ်ပုတ်, သင်မူကားတစ်ဦး timer နေရာမှာစတင်သို့မဟုတ်နှိုးဆော်သံသတ်မှတ်မထားနိုင်. အဆိုပါ timer နေရာမှာလည်းအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝစ်ဂျက်ရှိသည်ပါဘူး, အဘယ်မှာရှိနှိုးဆော်သံပါဘူး.
Samsung ရဲ့ S-Voice ကိုတိုင်မားနှင့်အခြားအမြန်လှုပ်ရှားမှုများ setting များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ငါမူကားတစ်ဦး Hangout ရန်တစ်ပြန်ကြားချက် dictate ဖို့ကြိုးစားနေရုန်းကန်. on-screen ကိုကီးဘုတ်အမြန်အမှုအရာအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, အလှည့် bezel reply တစ်ဦးအမြန်ရုပ်ပြောင်ကိုရွေးဖို့ကလွယ်ကူစေသည်စဉ်.
Samsung ရဲ့ S-Voice ကို system ကိုတိုင်မားနှင့်နှိုးစက် setting များအတွက်ကောင်းစွာလုံလောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့် Google Now ကသို့မဟုတ် Apple ၏ Siri အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Samsung ကဂီယာ S2 မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်ငွေအအတွက်£ 249 ကုန်ကျ. အဆိုပါ Gear S2 ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်အတွက်£ 299 ကုန်ကျ. နှစ်ဦးစလုံးကြိုတင်မှာယူရရှိနိုင်ပါသည်, အပေါ်တင်ပို့ 12 နိုဝင်ဘာလ.
သူတို့က Android ကို-သဟဇာတနာရီများအတွက်စျေးနှုန်း bracket က၏မြင့်ဆုံးပေါ်မှာ. အဆိုပါ Pebble အချိန် £ 180 ကုန်ကျ, ထို ရွေ့လျားမှု 360 £ 229 နှင့် Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ £ 289. အဆိုပါ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ £ 299 ကုန်ကျ.
ဒါဟာ developer များအားဖြင့်ပလီကေးရှင်းထောက်ခံမှု Tizen ရဲ့မရှိခြင်းအားဖြင့်ပြန်ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်, ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်နိုင်သော, ဒါပေမဲ့ကိုယ့် Samsung က Android စမတ်ဖုန်းထက်ပိုမို၎င်း၏ထောက်ခံမှုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်.
အကောင်းအဆိုး: အဆင်ပြေ, မြတ်သောအလှည့် bezel interface ကို, ကျယ်ပြန့် Android ကို compatibility, ရေစိုခံ, အလွန်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်, NFC ကို
Cons: ကန့်သတ် app ကိုထောက်ခံမှု, စီးပွားဖြစ်ကြိုး, S-Voice ကို Google မှယုတ်ညံ့အခုတော့, အဘယ်သူမျှမ Cross-platform ကိုထောက်ခံမှု
Music ကိုထိန်းချုပ်မှုကို double ငယ်လေး button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်, ထို setting ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အခြားမည်သည့် app ကိုတတ်နိုင်သမျှအဖြစ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Pebble အချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်: iPhone ကိုထက်ကို Android ပေါ်မှာပိုကောင်း
Motorola က Moto 360 (2015) ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အဘယျသို့မူရင်းဖြစ်သင့်
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ရှုပ်ထွေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလုယူလှပသောဟာ့ဒ်ဝဲ
Samsung က Gear ကို S ပြန်လည်သုံးသပ်: ဖုန်း built-in နဲ့စမတ်နာရီစမတ်ဖုန်းကိုအစားထိုးနိုင်?
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်နာရီ, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← အနီရောင်ဂြိုလ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုအသွင်ပြောင်းငါးအင်္ဂါဂြိုဟ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း (2015) [VIDEO] →